Ahoana ny fomba fanadiovana ny WhatsApp amin'ny iPhone sy Android | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba fanadiovana ny WhatsApp amin'ny iPhone sy Android
Paco L Gutierrez | | General, WhatsApp
WhatsApp dia tsy isalasalana fa ny fampiharana izay sintomin'ny mpampiasa smartphone rehetra vantany vao manomboka ny fikirakirana, no hany antony nahatonga ny olona maro hampiasa terminal terminal manan-tsaina, satria mamela antsika handefa hafatra eo no ho eo amin'ireo mpampiasa eto amin'izao tontolo izao. Mety tsy izy no tsara indrindra, satria ny rindranasa toa ny Telegram dia manolotra fiasa maro izay mahatonga azy io ho maro zavatra sy ilaina kokoa. Na ny Apple's iMessage, izay manolotra serivisy miavaka ihany koa, saingy sarotra be ny manova fahazarana ary izany no antony tsy ahafahanao manova ny olon-drehetra ny fampiharana fandefasan-kafatra.
Noho izany koa ny tombony tsara indrindra amin'ny WhatsApp, ny isan'ny mpampiasa azy dia be loatra ka tsy misy olona mahavita raha tsy misy azy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanatsara ny asany io fampiharana io, indrindra fa hatramin'ny nandraisan'ny Facebook ny tompony. Ny rindranasa dia manana zavatra tsara maro, eo amin'izy ireo ny fahafaha-mifanakalo karazan-drakitra rehetra amin'ny fifandraisantsika, izany no mahatonga ny fitahirizanay miafara feno singa izay tsy ilaintsika ary mametra antsika izany rehefa afaka mitahiry zavatra manan-danja. Eto izahay dia hanisy antsipiriany ny fomba hamahana an'io sy ny tetika maro hafa.
1 Fetsy hitazonana ny fahadiovan'ny WhatsApp
2 Atsaharo ny fisintomana mandeha ho azy amin'ny iPhone sy Android
2.1 Ahoana ny fomba hanaovana azy amin'ny iPhone
2.2 Sakano ny sary tsy hifarana amin'ny iPhone Camera Roll
2.3 Atsaharo ny fisintomana mandeha ho azy amin'ny Android
3 Ahoana ny fomba fanadiovana WhatsApp amin'ny iPhone na Android
3.1 Famafana ny atiny IPhone
3.2 Famafana ny atiny amin'ny Android
3.3 Safidio izay tiana hamafa na hotehirizinay
Fetsy hitazonana ny fahadiovan'ny WhatsApp
Hanomboka amin'ny fototra indrindra isika ary tsy inona izany fa ny fisorohana ny fitohizan'ny fako ao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra ankafizinay indrindra, ampahany amin'ny andavan'andro na saika ny olona rehetra, tsy mitsahatra mandray audios, gif na meme fotsiny, eny Mety hampihomehy antsika izy ireo, manelingelina antsika izy ireo rehefa mijery ny galerantsika. Tsy mahafinaritra ny te-haneho ny sarin'ny fahatsiarovantsika ary mahita tsy nahy isika amin'ny sasany amin'ireo bullshit azontsika tamin'ny iray amin'ireo vondrona marobe. Ho fanampin'ny fakana toerana sarobidy.
Atsaharo ny fisintomana mandeha ho azy amin'ny iPhone sy Android
Ity no tokony ho dingana voalohany andao hampiasa iPhone na Android. Izy io dia fiasa iray izay ampandehanana amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, izay mahatonga ny ankamaroan'ny olona hahita ny tenany manana olana mitadidy feno ary tsy maintsy mamafa tsy tapaka na mankany amin'ny faran'ny tsy maintsy esorina ilay rindranasa.
Ahoana ny fomba hanaovana azy amin'ny iPhone
Tsindrio eo "Fametrahana"
Hisafidy ny safidy isika "Data sy tahiry"
Ao amin'ny fizarana "Fampidinana rakitra mandeha ho azy" Mifidiana "Tsia" isaky ny fisie izay tsy ilainay ny manohy misintona ho azy ao amin'ny terminal anay, izay anananay ny sary, horonan-tsary, audio ary antontan-taratasy. Izaho manokana dia manoro hevitra ny hanafoanana azy rehetra sy ny ho mpanapa-kevitra raha te hampidina azy ireo amin'ny tanana isika.
Sakano ny sary tsy hifarana amin'ny iPhone Camera Roll
Ny olana iray hafa anananay amin'ny iPhone dia ny fandehanan'ny sary mivantana any amin'ny fizarana sary ao amin'ny terminal anay, noho izany izy ireo dia afangaro amin'ireo sary raisinay amin'ny fakantsary. Izany no mahatonga antsika rehefa mitady sarin'ny fialantsasatra na fitsingerenan'ny andro nahaterahana farany isika dia tsy maintsy mivezivezy eo anelanelan'ny meme na sary marobe tsy tiantsika ho hita. Mba hialana amin'izany dia mila manaraka ireto dingana tsotra ireto fotsiny ianao:
Nifidy ny safidy izahay "Chats"
Hofoaninay ny safidy «Tehirizo amin'ny sary»
Safidy iray hafa izay navadika ho default amin'ny iPhones rehetra misy antsika ary koa iray amin'ireo izay miteraka olana betsaka indrindra mandritra ny fampiasana azy ity dia zavatra tsy mitranga amin'ny Android, izay ananan'i WhatsApp folder misy sary azy manokana. Manomboka amin'ity fotoana ity dia tsy mila miahiahy momba ilay olana intsony ianao, manomboka izao raha te hanana sary WhatsApp amin'ny roul ianao dia tsy maintsy ampidirinao an-tanana ary safidio ny safidy.
Atsaharo ny fisintomana mandeha ho azy amin'ny Android
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia tsindrio ireo teboka 3 izay ananantsika eo amin'ny ankavanana ambony sy ny fidirana «Fikirana»
Niditra izahay "Data sy tahiry"
Ao amin'ireo fizarana «Misintona miaraka amin'ny angona finday» Azontsika atao ny manafoana ireo rakitra rehetra izay tsy tiantsika sintomina ho azy rehefa mampiasa ny angon-drakitra finday, ao amin'ny fizarana izahay «Misintona amin'ny WiFi» Azontsika atao ny manafoana ny zavatra rehetra izay tsy tiana sintomina ho azy rehefa mampiasa WiFi.
Ahoana ny fomba fanadiovana WhatsApp amin'ny iPhone na Android
Ary satria efa niomana ny hisoroka ny fidirana amin'ny fantsom-panadiovana tsy manam-petra isika izao, dia afaka manohy ny fanadiovana tanteraka ny fako nomerika izay efa notehirizinay tao amin'ny fampiharana WhatsApp. Raha efa ela ianao no nampiasa fampidinana mandeha ho azy ary nitahiry WhatsApp tamin'ny roul, dia hanana asa hatao ianao.
Famafana ny atiny IPhone
Manadio tsy misy soritra, WhatsApp dia namela safidy iray natao ho azy. Ho an'ity dia mila manaraka ireto dingana manaraka fotsiny ianao:
Niditra izahay "Fametrahana"
Tsindrio izao "Data sy tahiry"
Nifidy ny safidy izahay "Fampiasana fitehirizana"
Aorian'izay hahita lisitra iray mifanentana amin'ny resaka sy vondrona rehetra nosokafanay na voatahirinay izahay amin'ny WhatsApp ary hampahafantatra anay ny habaka fonenan'ny tsirairay amin'izy ireo. Ao anatin'ireto resadresaka na vondrona ireto dia hanana karazana rakitra isika, anisan'izany ireo:
Raha tsindrio eo amin'ny farany ambany izay misy ny hoe "Tantano" dia ho afaka hanafoana ny atiny izay nofidintsika manokana tamin'ny resaka tsirairay. Tokony hotadidintsika fa raha mamafa ny atiny isika dia hamafa ny zava-drehetra nefa tsy mamela soritra. Noho izany dia mamporisika ny hanao an'io izahay, miaraka amin'ny resaka na vondrona izay hainay tsara fa tsy misy zavatra tazominay.
Famafana ny atiny amin'ny Android
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia tsindrio ny Teboka 3 izay ananantsika eo amin'ny farany ambony havanana sy fidirana «Fikirana»
Hiditra isika izao "Fampiasana fitehirizana" izay ahitantsika ny resadresaka rehetra na vondrona izay efa notehirizinay tao amin'ny fampiharana WhatsApp anay, ao anatin'izy ireo tsirairay avy dia hanana ny toerana iasan'ny tsirairay amin'izy ireo izahay amin'ny fanaparitahana azy ireo amin'ny karazan-rakitra. Raha te-hanao fanadiovana lalina isika ary mazava fa efa manana izay mahaliana antsika voatahiry na tena fantatsika fa tsy halahelo na inona na inona isika, dia tsindrio ny farany ambany, izay voalaza ao "Afaho ny habaka."
Amin'izany fomba izany dia hadio tanteraka amin'ny fako ny rindranasan'ny WhatsApp, tsy mila manao fametrahana indray na mamafa ny rakitra izay tsy tadiavintsika tsirairay.
Safidio izay tiana hamafa na hotehirizinay
Raha mifanohitra amin'izay no izy, tsy te hamafana an-tsokosoko ny atiny izahay ary izahay te-hanao safidy feno. Amin'ny rafitra roa dia mitovy ny dingana:
Niditra tao amin'ny resaka na vondrona ao amin'ny fanontaniana
Kitiho eo an-tampony, misy azy io ny anaran'ny fifandraisana.
Misafidy ny safidy "firaketana"
Hiseho ny varavarankely izay ahitantsika ny zavatra rehetra azontsika tamin'io fifandraisana na vondrona io, noho izany afaka misafidy izay tiana hotehirizina na hamafa isika.
Manantena izahay fa manomboka izao dia izao olana iray kely kokoa isan'andro amin'ny smartphone-nao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » WhatsApp » Ahoana ny fomba fanadiovana ny WhatsApp amin'ny iPhone sy Android
Ny varotra tsara indrindra amin'ny gadget (herinandron'ny 18 ka hatramin'ny 24 Mey)
SPC Jasper, telefaona ho an'ny zokiolona miaraka amin'ny WhatsApp [ANALYSIS]